Odisha Beach Tours | Amabhishi amnandi - Shayela manje i-993-702-7574
Ukufuna ukuthola ithotela elwandle eliphumuzayo? I-Sand Pebbles 'I-Odisha Beach Tours iyimpendulo yakho engcono kakhulu. I-Odisha ingenye yezindawo ezibucayi kakhulu zokuba namakhilomitha angaphezulu kuka-485 ogu lolwandle oluphefumulayo. Sibusiswe ngamanzi ahlanzekile ahlaza okwesibhakabhaka, ahlanganiswe nenye yesihlabathi esihlanzekile nesihlanzekile emhlabeni wonke. Amatshe amahlumela anikela ngephakethe elihle kunazo zonke ze-Odisha Beach Tours. Yindawo ephelele yokukhipha lapho uthabatha ama-sunset ehle kakhulu. Njengoba inqwaba yezindiza ezikhulayo, amabhishi akwa-Odisha ayanokufinyeleleka ngokwengeziwe, ekwakheni indlela engenamandla ukuze uthathe uhambo lwakho lokuphupha. I-Odisha yindawo ehamba kuyo yonke indawo, unesimo sezulu esihle kuzo zonke izinkathi. Akulona nje kuphela, ugu lolwandle olubanzi luchaza ukuthi izindawo zokungcebeleka olwandle e-Odisha zihluka kakhulu kuye ngokuthi indawo. I-Odisha amabhishi ivela ekugqugquzelweni kwezinhlobonhlobo zezinto eziphilayo ezingaphandle kwemvelo ukuya ekwakhiweni kwamakilasi emhlabeni, ukudla okuhle ukuthula okuphumuzayo, okwenza kube indawo ephelele yezivakashi ezivela kuzo zonke izici zokuphila ezifuna iholidi impilo yonke. I-Odisha Beach Tours ihlanganisa konke. Ayikho indlela engcono yokuzwa injabulo yalezi zinhlanzi ezihle kakhulu kunokuba iphakethe le-Sand Pebbles le-Odisha beach Tours.
Lezi ziphakheji zinikeza ukubuka kwezinye izindawo eziqhakazile kakhulu u-Odisha okufanele anikele, kuyilapho futhi ekukhipha endleleni eshayelwe. Iziqondiso zakho eziqondayo ziholele ekuvakatheni okungavamile okubandakanya ukujabulela ukudla okumnandi nokuyiqiniso okuvela kuwo wonke umbuso. Akukho lutho olufana nokumba izinzwani zakho esihlabathini futhi ukugcoba ukukhanya kwelanga okukhazimulayo kwase-Asia. Zonke ukucindezeleka nokukhathazeka kwakho kuzogeza emanzini ohlaza okwesibhakabhaka, kukushiye esimweni sokuthula esingazi ukuthi ungazikwazi.
Uma usulungele ukuzwa ubuhle obungapheli balezi zinhlanzi ezinkulu, sicela uxhumane nathi namhlanje futhi sivumele ukuthi sikusize uthole uhambo oluphelele lwe-Odisha beach. Sikunikeza ama-Beach Tour Operators amahle kunawo wonke ku-Odisha, kufaka phakathi ama-Beach Resorts ku-Odisha, ukuze ube nesikhathi sesikhathi se-Sandla Amabhulethi we-Odisha Beach Tourism.
I-Odisha Beach Tour Packages (Izinsuku / izinsuku ze-9 | Ikhodi Yokuvakasha: 008)
DAY 01: Ukufika
Hlangana futhi ubingelele lapho ufika eKolkata Airport / Rail Station Station bese udlulisela ehhotela langaphambi kokubhuka. Ukuphumula kwelanga mahhala ngemisebenzi yakhe. Ngobusuku ku Kolkata.
Ngemuva kokudla kwasekuseni isigamu sokuvakashela eKolkata nokudonsa ntambama esiteshini sesitimela ukuya emgwaqeni ukuya eBalasore. Thatha esiteshini sesitimela saseBalasore bese udlulisela ku-Chandipur. Ngena ehhotela. Ngobusuku ku-Chandipur.
Usuku olugcwele uphumule ku-Chandipur Beach. Ngobusuku ku-Chandipur.
Ekuseni emva kokudla kwasekuseni ukuya eBhubaneswar ukuvakashela emgwaqeni Ratnagiri, Udayagiri & Lalitgiri (ama-monasteries aseBuddha ne-Stupas). Ngobusuku eBhubaneswar
DAY 05: I-Bhubaneswar - Konark
Ukuvakasha kwasekuseni kweThempeli eBhubaneswar (eParsurameswar, Mukteswar, Lingaraj, Rajarani & Vaital). Bese uhamba waya ku-Konark uvakashele i-Dhauli emgwaqeni (Ashokan Edicts) & Pipli (Indawo yokuSebenzi ye-Appliqué). Ukuhamba ngesihlwa kusihlwa eduze komfula oxhumanisa ulwandle futhi uphumule ogwini. Ngobusuku ku-Konark.
Ngemuva kokudla kwasekuseni uye eKonark Sun Temple (Black Pagoda), e-Chandrabhaga Beach naseTamchandi Temple Puri hlola ehhotela. Ngemuva kokuhlwa ukuvakashela eNkosini Jagannath Temple ukuhlanganyela ku-Live Aalati Darshan. Kusihlwa kubuyele kwi-Golden Beach & Beach Market yasePuri. Ngobusuku ePuri.
Ukuvakasha kwasekuseni ethempelini laseJagannath ethempelini (Abangewona amaHindu abavunyelwe ngaphakathi ethempelini), Grand Road Emva kokudla kwasekuseni ukuya eGopalpur ehambela iRughurajpur (Idolobha leMagugu) neChilika Lake eBarkul. Jabulela ukuhamba ngesikebhe ngaphakathi echibini ukuyobuka isiqhingi saseKalijai nesiNalaban Birds.Overnight e-Gopalpur.
Ngemuva kokudla kwasekuseni uvakashele eTaptapani Hot Sulfur Spring. Ntambama ibuyele eGopalpur Beach. Ngobusuku eGopalpur.
DAY 09: Ukuhamba - I-Airport yeBerhampur Railway Station / Bhubaneswar
Ngemuva kokudla kwasekuseni ukuya eBerhampur Railway Station / iBhubaneswar Airport for uhambo oluqhubekayo.